इपिएल प्लेअफ : कुन टिमलाई के आवश्यक? | Hamro Khelkud
इपिएल प्लेअफ : कुन टिमलाई के आवश्यक?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) चौथो संस्करण काठमाडौंको टियु क्रिकेट मैदानमा जारी छ । इपिएलका लिग चरणका तीन खेल बाँकी छन् । ६ टोलीबीचको प्रतिस्पर्धामा प्लेअफमा तीन टोलीले स्थान पक्का गराएका छन् । विराटनगर वारियर्स लिग चरणबाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ । अव दुई टोली मध्य एकले प्लेअफमा स्थान बनाउनेछन् ।
चितवन टाइगर्स सुरुवाती चार खेलमा चारमानै जितका साथ क्वालिफायरमा स्थान पक्का गराएको छ । कागजी रुपमा तुलनात्मक रुपमा केहि कमजोर देखिएपनि मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ शीर्ष दुईमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो । चितवनसँग पहिलो क्वालिफायरमा को भिड्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । भैरहवा दुई र पोखरा एक खेल खेल्न बाँकी छ ।
लिगका पाँचै खेल खेलेको ललितपुर काठमाडौंको नतिजा पर्खेर बसेको छ । समिकरण अनुसार ललितपुर ३ अंकमै पनि प्लेअफ खेल्न सक्छ । ललितपुर पनि त्यहिँ अंक गणीतिय आशामा बसेको छ । तर त्यसको लागि पूर्णरुपमा अरुको नतिजामा निर्भर हुनुपर्छ । इपिएलमा लिगका शीर्ष दुई टोलीले पहिलो क्वालिफायर खेल्नेछन् । विजेता टोली सोझै फाइनलमा पुग्नेछ । पराजित हुने टोलीले दोस्रो क्वालिफायर अवसर पाउने छ ।
लिगमा तेस्रो र चौथो स्थानमा रहने टोलीले एलिमिनेटर खेल्नेछन् । एलिमिनेटर विजेताले पहिलो क्वालिफायरमा पराजित हुने टोलीसँग फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । पहिलो क्वालिफायर र एलिमिनेटरका खेलहरु बुधबार हुनेछन् । दोस्रो क्वालिफायर बिहीबार र फाइनल शनिबार हुने छ । इपिएल विजेताले ५० लाख र उपविजेताले १५ लाख रुपैयाँ प्राप्तगर्नेछन् । इपिएल प्लेअफ समिकरण पूरा हुन कसलाई के आवश्यक पर्छ हेर्नुहोस् :
सन्दीप लामिछाने कप्तान रहेको काठमाडौंलाई प्लेअफमा पुग्न अव दुई खेलमा मात्र एक अंक आवश्यक छ । बाँकी दुई मध्य एक खेलमा विजयी भएमा स्वत प्लेअफमा पुग्ने छ । काठमाडौंले सोमबार पोखरा र मंगलबार भैरहवासँग खेल्नेछ । यी दुई खेल मध्य एकमा पराजित र एक खेल वर्षाको कारण अंक बाँडेपनि प्लेअफमा पुग्नेछ । तर दुबै खेलमा पराजित भएमा भने ललितपुर ३ अंकका साथ प्लेअफमा स्थान बनाउने छ । पोखरा र भैरहवा दुबै टोलीलाई शीर्ष दुईमा रहन जित्नैपर्ने हुँदा खेल रोचक बन्ने आशा गरिएको छ । काठमाडौं ३ खेलमा १ मा जित र २ मा हार सहित २ अंक जोड्दै पाँचौं स्थानमा छ ।
साविक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सले लिगका सबै खेल खेलेको छ । ५ खेलमा ललितपुर ३ मा हार र १ मा जित सहित ३ अंकका साथ चौथो स्थानमा छ । अन्तिम चारमा रहेर प्लेअफ खेल्न काठमाडौं बाँकी दुबै खेलमा पराजित हुनुपर्छ । काठमाडौं दुबै खेलमा पराजित भएमा ललितपुर ३ अंकमै प्लेअफ खेल्नेछ । तर काठमाडौं एक खेलमा विजयी वा अंक बाँडे भने पनि ललितपुरको सम्भावना सकिनेछ ।
चितवन पहिलो पटक इपिएलको क्वालिफायरमा छ । चितवन अपराजित रहँदै क्वालिफायर खेल्ने सोचमा छ । चितवनले भैरहवालाई पराजित गरे १० अंकका साथ शीर्षस्थानमा रहनेछ । भैरहवासँग पराजित भएपनि शीर्षस्थानमा रहन सक्छ । अन्तिम खेलमा भैरहवा काठमाडौंसँग पराजित ८ अंक पुग्नेछैन । जसले गर्दा चितवन शीर्षस्थानमा रहनसक्छ ।
पोखरा प्लेअफमा पुगिसकेको छ । तर शीर्ष दुईमा रहँदै क्वालिफायर खेल्न सोमबार अन्तिम खेलमा काठमाडौंलाई हराउनुपर्ने हुन्छ । अन्तिम खेलमा पोखरा विजयी भएमा उसको ५ खेलमा ७ अंक हुनेछ । ७ अंकमै रहेर प्लेअफ खेल्न भैरहवाले बाँकी दुई खेल मध्य एकमा हार्नुपर्छ । भैरहवा दुबै खेलमा विजयी भएमा भने पोखराले काठमाडौंलाई पराजित गरेपनि एलिमिनेटर खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
भैरहवा ३ खेलमा १ मा जित सहित ४ अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ । भैरहवा प्लेअफमा पुगि सकेको छ । तर भैरहवा सोच शीर्ष दुईमा रहँदै प्लेअफ खेल्ने हुनेछ । भैरहवा शीर्षस्थानको लडाईंमा हुनेछ । भैरहवाले सोमबार चितवन र मंगलबार काठमाडौंसँग खेल्नेछ । दुबै खेलमा विजयी भएमा भैरहवा शीर्षस्थानमा रहनेछ । भैरहवा दुबै खेलमा विजयी भएमा ८ अंक हुनेछ । चितवनको पनि ८ अंक हुँदा नेटरनरेटको आधारमा शीर्षस्थानमा रहनेछ । अथवा पोखरा अन्तिम खेलमा पराजित भएमा र बाँकी दुई खेल मध्य एक खेलमा विजयी भएमा पनि भैरहवा शीर्ष दुईमा रहनेछ ।